Mourinho oo Man Utd la wareegey macallinkeedii hore weeraray, guul deg deg ahna ballan qaaday + Sawirro – Gool FM
Mourinho oo Man Utd la wareegey macallinkeedii hore weeraray, guul deg deg ahna ballan qaaday + Sawirro
Raage July 5, 2016
(Manchester) 05 Luulyo 2016 – Jose Mourinho ayaa bilaabay waayihiisa Manchester United isagoo sheegay inuu yaraaday hankii naadigu tan iyo markii uu howlgabey macallinkii hore ee Sir Alex Ferguson.
Macallinkan reer Portuguese ayaa rasmiyan loosoo bandhigay maanta isagoo bedelaya Louis van Gaal isagoo muujiyey sida uu u dareensan yahay hoos u dhaca muuqda ee naadigaasi ku dhacay kaddib markii uu ciyaaraha ka fariistay Sir Alex Ferguson.
Mourinho ayaa doonaya inuu durba hanto horyaalka Premier League isla fasalkiisa 1-aadba, isagoo weerar ku qaaday macallinkiisii hore ee Van Gaal, isagoo leh ” ma doonayo inuu ku daba dhuunto erayo iyo falsafado’.
Mou oo 53 jir ah ayaa soo qaatay laacibka khadka dhexe ee Borussia Dortmund ee Henrikh Mkhitaryan, isagoo Armenian-kasoo bixiyey £26million, waxaa sidoo kale kooxda kusoo biiray Zlatan Ibrahimovic oo bilaash ku yimid.
‘Aad baan ugu wanaagsanaa inuu ku hoos dhuunto erayo iyo falsafado,’ ayuu yiri Mourinho oo ka hadlayey gudaha Old Trafford qaybta Europa Suite oo sida la dareemayo warkaas ula dan lahaa LvG.
‘Waxaan jeclahay inaan weerar ahaado oo aan sheego inaan guul doonayo. Muhiimaddu waa dhalinta goolal ka badan kooxda kaa horjeedda si ay taageerayaashu kuugu faanaan. Waxaan doonayaa wax kasta. Sanado yar kahor guushu dabeecad ayay u ahayd kooxdan, marka waxaan doonayaa inay taageerayaashu illoobaan 3-dii sano ee lasoo dhaafay.” ayuu raaciyey Mourinho.
”Guul la’aan maba shaqayn karo oo taasi waa dabcigayga.” ayuu ku daray.
WAR CUSUB: ''AC Milan waan iibiyey waxaana la gelin doonaa lacag badan'' - Berlusconi oo 30 sano kaddib caddeeyay inuu Milan ka tegayo
Qiimaha Antoine Griezmann oo kor u siikacay kadib qaab ciyaareedkiisa fiican ee Euro 2016